यी नै हुन् आज बिहान स्कूल बस सरैयाडाडाँको चोमा दु,र्घ’टना मा परी मृ,त्यू भएकी अस्मिता ! – Khabar Patrika Np
यी नै हुन् आज बिहान स्कूल बस सरैयाडाडाँको चोमा दु,र्घ’टना मा परी मृ,त्यू भएकी अस्मिता !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १०, २०७७ समय: २२:३९:०९
अस्मिताको घ’टना ‘स्थलमै र किरणको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारको क्रममा मृ’ त्यु भएको ज्ञानज्योति कलेजका यातायात प्रमुख पोषण वलीले जानकारी दिनुभयो । घा’ इ तेहरुको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उ ‘प’चार भइरहेको छ ।’** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यो पनि दाङको तुलसीपुरमा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान पब्लिक ज्ञान ज्योति माविको बस दुर्घटना हुँदा अस्मिता डागी र किरण चौधरीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुका प्रमुख डीएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए।
अस्मिताको घटनास्थलमा र किरणको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएकोउनले बताए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका- १५ कोठरीमा प्लस टूका विद्यार्थी ल्याएर बजारतर्फ आउँदै गरेको बस दूर्घटनामा परेको हो। दूर्घटनामा १५ जना जना घाइते भएका छन्। घटनाका घाइतेलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******